XOG: Xaggee lagu hayaa Wasiir Janan, maxaase uga qorsheysan Xukuumadda Faderaalka?
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya halka sida rasmiga ah ugu xiran yahay wasiirkii Amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur (Janan) oo ay ku eedeeyeen booliska Soomaaliya in uu galay dambiyo culus, oo ay hadda baaris ku wadaan laamaha ammaanka ee Soomaaliya.
Hay’adda Amnesty International ayaa ku eedeeysay shalay galab in uu Col, Janan geystay tacadiyo ka dhan ah xaquuqda Aadanaha oo ay tahay in sida ugu dhaqsaha badan loo horkeeno maxkamad rayid ah, iyadoo sheegtay in qabashadiisu ay ka dhigan tahay in aan cidna ka dhuuman karin Cadaaladda.
Jubbaland ayaa qabashada wasiirkeeda amniga ku sheegtay mid la doonayo in lagu siyaasadeeyo xaaladda doorashada labada dhinac, waxayna sheegtay in talaabo kasta oo ka dhalata ay ka imaan doonaan ficilo aan wanaagsaneyn.
Dawladda Soomaaliya qabashada wasiirkan ka sokow, xariirka kala dhaxeeya Jubbaland ayaa xumaaday tan iyo markii ay bilaabatay ole-olaha doorashada Madaxweyne-nimada, oo ilaa hadda 3 Madaxweyne lagu doortay Kismaayo.
Warar ay heshay Puntlandtimes.com waxay cadeynayaan in uu Cabdirashiid Xasan Nuur ku xiran yahay xarun ay leedahay Hay’adda Sirdoonka ee Soomaaliya, kaas oo kuyaala agagaarka Madaxtooyada, isla markaasna ay wareysteen laamaha Ammaanka oo ay ka wada hadleen arrimaha.
Xog kale ayaa sheegaysa in Janan iyo Xukuumadda Faderaalka ay horey u galeen heshiis ku wajahan faragalinta Federaalku ay ku sameeyaan doorashada Jubbaland, balse ay taasi aysan suuragal noqon, maadaama culeys weyn oo ku wajahan arrimaha doorashada uu ka jiray dhinaca Madaxweynaha Jubbaland.